Thone Thone Professional Beauty Salon | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Thone Thone Professional Beauty Salon | Hlaing
သုံသုံ Beauty Salon ကို အမှတ် ၂၈၀ ၊ လှိုင်ဘာတာရုံလမ်း၊ ၁၀ လမ်းထိပ် ၊၂ ရပ်ကွက် ၊လှိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်မှာ အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ Facial treatment and spa ၊ Makeup နှင့် ဆံထုံး ၊ Nail cleansing နှင့် Arts ၊ Hair ပုံသွင်းခြင်းနှင့် အခြား ဆံပင်နှင့် ပတ်သက်သော ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုး၊ Body Massage ၊ Foot Massage တို့ကို ကျွမ်းကျင် Stylist မှ သဘောကောင်းစိတ်ရှည်စွာ လူကြီးမင်းများစိတ်ကြို က် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဆံပင်နှင့် မျက်နှာပေါင်းတင်ခြင်း ဆယ်ကြိမ်ပြည့်ပါက တစ်ကြိမ်အခမဲ့ပြု လုပ်ပေးပါသည်။ Branded Products များကိုသာ အသုံးပြုပေးပါသည်။
08:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No 280, Hlaing Train Station Road, 2nd Quarter, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား ကမာရွတ်ဘူတာရုံမှတ်တိုင် မှတ်တိုင် 8 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Thone Thone Professional Beauty Salon Thone Thone Professional Beauty Salon is located at No 200, Hlaing Train Station Road, 2nd Quarter, Hlaing Township, Yangon for nearly 20 years ago. The salon offers numerous kinds of beauty related services such as Hair Cuts, Perm, Wax, Coloring, Shampooing, Straightening, highlight, Nail cleansing & Arts, Make Up Service, facial & foot, body massage, Body Spa and so on. 10 +1 free service for Hair & facial. They use branded products from USA, France, Italy and many more.